Soszi, Mpanoratra ao amin'ny SmartMe
Lahatsoratra nosoratan'i Soshi
Dom » Lahatsoratra navoakan'i Soszi
16 Aprily 2021
Toy ny isan-kerinandro, manangona ny fampiroboroboana tsara indrindra ho anao amin'ny AliExpress, Geekbuying.pl sy ny maro hafa izahay! Mitady tolotra tsara ve ianao? Nahita azy ianao! Raha tsy fantatrao na te hampahatsiahy anao ny fomba fanaovanao fiantsenana mora vidy kokoa amin'ny ...
Ahoana ny fampiasana fandefasana valizy amin'ny Aliexpress - torolàlana fohy ho an'ny rehetra
13 Aprily 2021
Araka ny fantatrao, ianao dia afaka manafatra zavatra amin'ny valizy poloney poloney amin'ny Aliexpress mandritra ny fotoana lava. Izany no antony nanomananay torolàlana fohy ho anao izay azo antoka fa hanampy anao amin'ny fiantsenana. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba ...
Apple HomeKit, hevitra, Smart Home
Meross Smart Led Light Strip - famerenana ny strip LED lava
Android, homekit, iOS, ranomandry, tariby hazavana, meross, fahazavana, notaritarinao
Efa nanontany tena ve ianao raha mila LED? Mahasoa ve ny mampiasa vola amin'ireny? Ary raha eny, ahoana? Amin'ny famerenana anio dia holazaiko aminao ny momba ny loko LED miloko, izany hoe Meross Smart Led Light Strip ...
Apple HomeKit, hevitra
Meross power strip - gadget marani-tsaina ho an'ny rehetra
1 Aprily 2021
Android, paoma, Apple HomeKit, homekit, iOS, bara, meross
Miadana aho, lany ny habaka hampifandray ireo fitaovana marani-tsaina sy tsy dia marani-tsaina ao amin'ny efitranoko. Ka nieritreritra ny bara fanitarana aho. Fa fotoana fohy ... mahazatra loatra? Tsy misy dikany izany. Tonga namonjy ...
Fampitahana ireo mpanadio banga amin'ny kaontenera vovoka
31 Martsa 2021
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny am-polony taona maro, ireo mpanadio banga dia nahavita fanavaozana ny fanaraha-maso avy amin'ny bokotra ara-batana ka hatrany amin'ny fanaraha-maso app, manomboka amin'ny fifandonana tsy nahy ka hatramin'ny fanombanana tsara ny fisorohana sakana, manomboka amin'ny fandidiana an-tsokosoko ka hatramin'ny fandaminana ny lalam-be. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny teknolojia, manan-tsaina ...
drôna, Google Home, Home Assistant, Vaovao, Specials, Smart Home, Vehivavy Smart, finday avo lenta, Fandraisana Xiaomi
Tsingerintaona nahaterahan'i Aliexpress 29.03 martsa - 3.04.2021 aprily XNUMX! Fanavaozana - Kaody vaovao!
6 Aprily 2021
70mai, AirDots 2, aliexpress, amazfit, ANlan, Aqar, Aqara goba, AriDots Pro 2, Azdent, baseus, Bobot, Ender 3 Pro, Mandrakizay, honeywell, voninahitra, huawei, ilife, inface, Jimmy, KiCA, liectroux, Livolo, massager, MatePad, mi band 5, mi boat p, Mi Xcooter, Miji, moes, humidifier, oclean, madio, poco, fisondrotana, qcy, redmi, Reolink, roborock, vacuum madio, Sinocare, smartmi, sonoff, SOOCAS, Teclast, tronsmart, Tundeal, tuya, Usee, viomi, xiaomi, yeedi, yi
Fotoana fihenam-bidy hafa satria mankalaza ny faha-11 taonan'ny Aliexpress izahay! Ary ny fihenam-bidy amin'ny AliExpress dia midika tolotra lehibe ho anao! Raha tsy fantatrao na te hampatsiahy ny tenanao ny fomba fanaovana fiantsenana mora kokoa amin'ny Aliexpress, azafady ...
Jiro Meross - famerenana jiro mahafinaritra ho an'ny rehetra
28 Martsa 2021
Alexa, paoma, google home, mpanampy trano, homekit, meross, manan-tsaina an-trano, jiro maranitra
Vao haingana aho no nandinika ny Mi Bedside Lamp 2, izay jiro tiako indrindra hatrizay. Androany aho dia hanolotra ny fitaovana bebe kokoa ary hanolotra fahasamihafana vitsivitsy raha oharina amin'ny fitaovana Xiaomi. Ity ny jiro Meross izay miasa miaraka ...
Fampiroboroboana lohataona ao amin'ny magazay Xiaomi izay tsy tianao halahelo!
Tonga any aminao izahay miaraka amin'ny vaovao tsara sy amin'izay tianao indrindra! Varotra! Manomboka anio, any amin'ny magazay Xiaomi ary amin'ny https://mi-store.pl/, https://mi-home.pl/, https://mimarkt.pl/ ary amin'ny fivarotana an-tserasera sy ara-batana tsara dia manomboka izy ireo .. ...